IsiTshazi saseNgesi luhlobo lwezinja
Xa uthenga inja ofuna ukuba isilwanyana sibe nobungane kwaye sihle, phila kakuhle nabantwana. Ngaphansi kweendlela ezinjalo zikhona iintlobo ezininzi kunye ne-English setter - udidi lwezinja lungenye yazo efanelekileyo kakhulu.
Bonke ababethi beza kuthi bevela eUnited Kingdom, kwaye amagama eentlanga zikhumbula ezo ndawo ze-Albion apho la mawa athathwe khona. Lawa ma-setters ase-Irish, eScottish and English. Kuzo zonke i-setters, uhlanga oluqhelekileyo luyi-English setter.
Umbala omhle kakhulu onamabala. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zombala: i-orange-mottled, i-color-colored (emnyama kunye nemacwecwe kunye ne-tan kunye nomdaka), i-yellow-mottled, i-speckled emnyama, inombala. Isetter yesiNgesi iyinja yokukhula ephakathi, eyakhelwe kakuhle. Ukunyakaza kuyamkeleka kwaye kuyathemba, ukunyameka kuyinto enhle, kwaye umzimba uphelele kwaye uhambelane. Lezi zinja ezinamandla ezisebenza ngokukhawuleza, zikhutshwa njengezinja zokuzingela, ziyakwazi ukuziqhayisa ngobuqili babo obubukhali nokunyamezela. Uboya bee-setters zesiNgesi bukhazimulayo kwaye bubukhali, bukhulu kwaye bude, kwaye bunokuba buncwane okanye bunqamle.
Ummiselo unikezelwa kumnini
Ngokwemvelo yesi-English setter breed isilwanyana esihle kwiintsapho ezinezingane. Ezi zinja zinyanisekile kwikosi yazo, zithandekayo, zinobuhle kwaye zinobungane kakhulu. Uhlobo olunentlalontle lwezinja kwaye luhle kakhulu kwiindwendwe eziza endlwini yakho. Uyakwazi kakhulu ukuqeqeshwa, kuzo zonke iisethi ezithobelayo. Akayithandi ngokuyiphukuphuku ukwenza iimyalelo, kwaye kufuneka uzame ukuba yinja kungekhona nje inkosi, kodwa umhlobo.
Abaninzi beetters banobungane, bathandekayo, kwaye ukuba i-puppy ayinakufundiswa kakuhle, zonke iimpawu zayo ezintle zingenakwenziwa. Xa uthatha intshontsho kwi-setter yesiNgesi endlwini, kufuneka udale indawo enokuthula endlwini ukuze ufumane inzuzo yendalo yakho inja.
Ukugqwesa kunye nabantwana be-English setter, kodwa inja ingcono ukuba ungashiyi umntwana omncinane kakhulu. Nangona i-setter ayilona nto yokuqala yokukhubekisa umntwana ngaphandle kwesizathu, umntwana omncinci akasazi indlela yokuphatha izilwanyana kwaye angakhubekisa inja. Abantwana abaneminyaka engama-5 kufuneka bafundiswe indlela yokuphatha inja, ngoko isetter iya kuqonda isimo esihle sengqondo esivela kumntwana kwaye siya kumthobela.
Musa ukunyamezela uxolo
Ukuba awukwazi ukuhlawula ngokwaneleyo inja, njengoko uhlala wodwa, kungcono ukuba ungabi nesi-English. Ezi zinja ziziva zingenasiphelo kwaye zintlalontle. Yaye ukuba akukho nxiqhagamshelwano rhoqo nomnini - isetter iya kubuna, ngoko awukwazi ukugcina isetter isiNgesi kwindlu.
Awunakukhathazeka yizinto ezikule ntja, kufanelekile ukugcina kwiimeko zasezidolophini. Izinto ezimbini kufuneka ziqwalaselwe:
Ekubeni abahleli bezinja ezizingelayo, bafuna umsebenzi owenzela umzimba. Ukuba wayevuya kwaye enempilo, kunye naye kufuneka uhambe ngeyure enye ngosuku.
Ngokuba iinwele ze-setter ofuna ukuzinyamekela, ngaphandle kokunyamekela zixubha kwaye ziya kubonakala zikhoyili. Kufuneka udibanise inja rhoqo kwaye unqande iinwele kwiipaws phakathi kweepads. Sekunjalo kubalulekile ukunqumla uboya entanyeni ukuya kwithambo lesifuba nangaphantsi kweendlebe.
Isetter sesiNgesi singathathwa kunye nawe nayiphi na indlela yokuhamba, kwinkampani. Uziphatha ngokuchanekileyo kuluntu lwabantu, ngenxa yoxolo lwakhe. Uzolile kwizithuthi zikawonkewonke, kwimoto, ngeendlela ezide. IsiTshazi saseNgesi sikhuthaza umoya ojabulisayo endlwini kunye nemikhosi, kwaye kubantu abangenayo ayibangeli iingxaki, kodwa kugxininisa kuphela ukuvakasha nokuthokoza.
Kukulungele ukuyigcina kwisixeko, ama-setters amnandi, alinganisekanga kwaye angabi nobudlova. Izi-setters zesiNgesi zinobungane kakhulu, kunye nezinye izinja azikhweleyo kwiintlwano, akuzange kubekho iimeko apho ziluma abantu, kodwa ukuba ziyimfuneko zikwazi ukuzimela.
Abadlali abaninzi bazingela, baboniswa kwimincintiswano, banezo diploma. Kwaye nokuba i-setter iyinja ekhangelekayo yokuzingela, oku akuthethi ukuba ufuna kuphela ukuzingela nayo, okokuqala yinto engumhlobo kunye nomhlobo wentsapho.
Ukuzingela kunye nesetter
Kwilizwe lakwasetyeni lwesiNgesi, eNgilani, ukuzingela nge-setter ngumcimbi obalaseleyo, owenzelwe ngaphambili, odibanisa ukuzingela, ukuvavanya kunye nomboniso omhle. Izithako eziza kusetyenziselwa ukuzingela, zilungiselelwe kwangaphambili ukusuka entwasahlobo, zikhetha ukuphakama okufanelekileyo kwengca yokuzingela, indawo kunye nokunye. Kuba ukuzingela kubonwa njengeengcali ezihlola umsebenzi wezinja kunye nabaphulaphuli. E-Rashiya, i-setter yazingelwa ngabantu abanengqiqo, abaqaqambileyo abaqonda kakuhle ukuba lolu hlobo lusebenza njani. Ngelo xesha baziqhenya ngobuqili benja ekufuneni, ukuqala kwemeko, ukunyaniseka kunye neentlobo zesiganeko kunye nenani lomdlalo obulawe.
Abazingeli abaninzi bakhohliwe ukuba ukuzingela nge-setter akuyonto, kodwa ubuhle bomsebenzi xa uzama ukulungelelanisa isiNgesi kwiimeko zokuzingela zaseRashiya. Ukuzingela nge-setter, kufuneka ube neenqwelwana ezikhethekileyo ezinqabileyo, ukuzingela kwiindawo ezilungiselelwe kwaye ujabulele ngendlela yokusekela i-setter yesiNgesi.
Ekugqibeleni, songeza ukuba inja yokuzala iNgesi i-Interarter is inja efanelekileyo, enobubele kunye novuyo, ungumhlobo omhle kunye nomhlobo.
Ukutya nokunyamekela iiproti ze-wavy
Izambatho eziphathekayo zezinja
Ukugcinwa kwezilwanyana ezifuywayo kwiindawo zokuhlala
Indlela yokukholisa umntu ukuba aqale isilwanyana
Indlela yokunyamekela kakuhle ihagu zeginea
Indlela yokunyamekela ngokufanelekileyo ukuthutha komhlaba
I-Cystitis kunye nendlela yokujamelana nayo
Izindlela zomntu ngamnye zokunakekelwa kwezempilo
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kunye ne-myocardial infarction
Indlela yokuhlala ngoxolo noninazala
Umququzeleli ogqityiweyo kwiintsuku ezili-10 kunye nelayamic lacquers ukusuka eLCN
Ukubalekela indoda: yintoni isigqibo seetoliki?
Ukuphuhlisa ngokomzwelo umntwana osenkulanga
Idada ebhaka ngekratshi
Ubisi buso bomlenze
I-recipe ye-borsch yeklasi
Iingubo eziphathekayo zokugqwesa u-2016
Indlela yokuphatha umntwana ezandleni zakho kwaye ungalimazi impilo yakho
Inhlanganisela epheleleyo: i-pancake ye-chocolate kunye ne-cherry kunye ne-curd cream
5 ezona zidlo
Iingenelelo kunye nokungahambi kakuhle kweemitha zamathambo